Sheekh Shariif oo Maanta Muqdisho dib ugu soo laabtay | raascasayrmedia.com
← Faroole oo si aan haboonayn uga jawabaay hadalki R/wasaare Farmaajo
Wefdiga Madaxweynaha Puntland oo Masuuliyin Caalami ah Kula Kulmay Jabuuti (Sawiro) →
Sheekh Shariif oo Maanta Muqdisho dib ugu soo laabtay
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa duhurnimadii maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho, kadib markii uu kulamo masuuliyiin ka tirsan beesha Caalamka kula soo qaatay dalalka Jabuuti iyo Masar.
Madaxweynaha iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan ayaa duhurnimadii maanta ka soo dagay Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen, Masuuliyiin ka tirsan golaha Wasiirada ee Xukuumada R/wasaare Farmaajo.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horeyn safakirkii uu ku tagay dalka Jabuuti waxaa uu halkaasi tababar uga furay Ciidamo ka tirsan dowladda KMG Soomaaliya iyadoo munaasabadii halkaasi ka dhacdeyna ay ka qeyb galeen Madaxda dowladda Jabhuuriyadda Jabuuti.
Madaxweynaha ayaa ka tagay dalkaasi Jabuuti isagoo ka qeyb galay kulankii Wasiirada arimaha dibada ee Carabta ugu soo gaba gaboobay Magaalada Sharmashiiq ee dalka Masar kaasi oo looga hadlayay arimo ay ka mid tahay Soomaaliya.
Majiro wax hadal ah oo uu madaxweynuhu siiyay Warbaahintii kula sugneeyd garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho hase ahaatee masuuliyiin ka tirsan dowladda KMGS oomaaliya ayaa Shabelle u sheegay in Madaxweynuu Maalmaha soo aadan uu faah faahin ka bixin doono waxyaabaha safarkiisa ugu soo qabsoomay.